Zavatra tokony hatao amin'ny fitsangatsanganana any Sydney | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Aostralia, General, Oseania, Sydney
Tsy maintsy miaiky aho, ny iray amin'ireo diako nofinofisiko dia ny mahita an'i Aostralia, manerana an'i Aostralia, ary izany no mahatonga ahy mandehandeha mamaky ireo tranonkala misy ity firenena lehibe ity. Toerana hahitantsika karazana tsy manam-paharoa, tanàna mavitrika ary natiora izay haka rivotra. Fa anio kosa dia hijanona ao Sydney, iray amin'ireo tanàna malaza indrindra ary marika rehefa miresaka momba an'i Aostralia.
Raha ny marina dia maro ny olona no mieritreritra fa i Sydney no renivohitr'i Aostralia noho ny fahafantarana azy, fa raha ny tena izy dia Canberra no renivohitra. Nanjary fantatry ny tandindona toa ny Opera House i Sydney. Saingy tsy izany ihany no zavatra ho hitanao raha manam-bintana hitety tanàna ianao, satria misy izany zavatra maro hafa tokony hatao ary jereo fa angamba tsy fantatrao.
1 Trano Opera any Sydney
2 Miakatra amin'ny Bridge Bridge
3 Tsidiho ny zoo Taronga
4 Masoandro vitsivitsy eo amin'ny Beach Bondi
5 Tsidiho ny faritra The Rocks
6 Mitoby eo amin'ny Nosy Cockatoo
Trano Opera any Sydney
Ahoana no mety hitranga raha tsy izany dia tsy maintsy manomboka amin'ny zava-dehibe indrindra isika, ary izany dia ny maritrano avant-garde an'ny opera dia malaza erak'izao tontolo izao. Any amin'ny seranan-tsambo no misy azy, eo amin'ny promenade Circular Quay, ahafahanao mandeha an-tongotra rehefa mahita ity trano ity hatrany lavitra. Fa azo atao koa ny manao a fitsidihana ao anaty opera, ao ambadiky ny seho, izay hanazavan'izy ireo amintsika ny fomba fiasan'ny ballet, opera ary ny lalao ao anatin'ny trano. Hatramin'ny 2007 dia tranokala manerantany izy io, ary naorina tamin'ny 1973. Androany ianao dia toerana ahitanao ireo karazana sanganasa sy famokarana mozika.
Miakatra amin'ny Bridge Bridge
Koa satria eto amin'ity faritra ity izahay dia azonao atao ny manararaotra izany hiakarana eo an-tampon'ny tetezana misy ny anaram-bosotra hoe 'la percha'. Ity tetezana ity dia natao mba tsy ny fiara ihany no afaka mivezivezy eo aminy, fa koa ny mpandeha an-tongotra sy bisikileta. Azontsika rehetra atao ny mamakivaky azy io, fa raha misy fanandramana tsy manam-paharoa dia an'ny mananika ny tampony handinihana ny bay rehetra miaraka amin'ny opera amin'ny fomba fijery mahavariana. Na iza na iza dia afaka manao ireny fitsangatsanganana mihazakazaka ireny, na dia tsy maintsy lazaina aza fa raha manana vertigo ianao dia tsara kokoa ny mifady.
Tsidiho ny zoo Taronga
Ao amin'ity zoo Taronga ity dia misy karazan-jaza teraka sy hafakely 2.900. Fitsangatsanganana mahafinaritra raha mandeha miaraka amin'ny ankizy isika, satria ho hitan'izy ireo ny biby marika indrindra ao Aostralia, toy ny koala tsara tarehy sy izaho kangaro. Eo koa ny tigra, gorila, leoparda, ary karazana maro hafa. Ho fanampin'izany, azo atao ny maka ny fonosana Roar sy Snore, hitoby ao amin'ny zoo mandritra ny alina, traikefa nahafinaritra ho an'ny ankizy.
Masoandro vitsivitsy eo amin'ny Beach Bondi
Mety efa fantatrao ilay morontsiraka Bondi malaza. Ara-drariny 10 kilometatra miala ny tanàna, mahatonga azy io ho iray amin'ireo be atao indrindra. Io morontsiraka io no miseho foana mandritra ny Krismasy amin'ny fahitalavitra, satria eo antenatenan'ny fahavaratra izy ireo raha eto ny ririnina ary efa fomban-drazana ny mandeha amoron-dranomasina miaraka amin'ny satroka Santa. Ao amin'ity faritra feno fasika ity, ny hetsika isan-karazany dia tanterahina mandritra ny taona, ka mahatonga azy io ho toerana tena mahafinaritra. Ary raha tsy misy izany dia afaka manomboka milalao onja ao anaty rano foana isika, na mandeha amin'ny arabe amin'ny Campbell Parade, izay misy fivarotana lamaody sy fisotroana ary fisakafoanana. Ankoatr'izay, eo akaikin'ity moron-dranomasina ity dia misy hafa, toy ny Palm Beach na Coogee Beach, izay manana ny hatsarany koa.
Tsidiho ny faritra The Rocks
Araka ny ho fantatry ny maro, Sydney dia zanatany fanasaziana taloha, ary amin'ity ampahany amin'ny tantarany ity dia mijanona ilay faritra fantatra amin'ny hoe The Rocks. Akaiky ny Circular Quay izy io ary handehandeha any afaka dimy minitra ianao. Toerana taloha ao an-tanàna izy io, izay ahitanao ny maze amoron-dalambe vita amin'ny vatolampy, sy ireo arabe toa tsy mitondra mankaiza. Toerana iray izay kolontsaina ankehitriny, miaraka amin'ny tranombakoka sy galeria, ary koa ny faritra misy ireo trano fisotroana tranainy indrindra ao an-tanàna. Amin'ny faran'ny herinandro dia afaka mitsidika tsena be dia be ianao, ary misy fitsangatsanganana koa hianaranao momba ny tantaran'ity tanàna ity.
Mitoby eo amin'ny Nosy Cockatoo
Ny Nosy Cockatoo dia manana anarana exotic indrindra, saingy eo amin'ny seranan-tsambon'ny tanàna no misy azy. Eo ambadiky ny tetezana fotsiny no nianihanantsika tao amin'ny seranan-tsambo. Azonao atao ny mandany filasiana alina ao, toy ny hoe eo afovoan'ny natiora isika, fa miala lavitra ny afovoan-tanàna. Azontsika atao koa ny mifoha amin'ny fomba fijery tsara indrindra, izay ho traikefa iray tsy hay hadinoina hanampy ity fitsidihana ity. Azonao atao ny mitondra ny tranolay na manofa azy amin'ny nosy, ary misy fitsangatsanganana ihany koa hianaranao ny tantarany, nanomboka fonja aloha, ary taty aoriana dia sambo fitaterana sambo. Androany, lojika, natokana ho an'ny fizahan-tany izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Aostralia » Zavatra tokony hatao amin'ny dia any Sydney
Aiza no handeha amin'ny safari any Afrika
Blue Lagoon, spa tsy hay hadinoina any Islandy